Etu esi achọpụta igwe foto zoro ezo n'ụlọ gị, ụgbọ ala gị na ọfịs gị? - OMG Ngwọta
Etu esi achọta kamera zoro ezo na ezin’ụlọ gị, ụgbọ ala na ọfịs gị?
Ọ bụ ọrụ na-ewe iwe ịchọta igwefoto zoro ezo n'ụlọ gị, n'ụgbọala gị, na n'ọfịs gị. Ọ bụ ihe nwute na, ọtụtụ mmadụ na-eme mkpesa banyere mwakpo a nzuzo dị ka ọ si bụrụ ihe na-apụta. Otu nnyocha gọnarịrị na pasent 11 buru ibu nke ndị zara azịza achọtara igwefoto zoro ezo n'ụlọ ha, ụgbọ ala, n'ọfịs ha, ma ọ bụ ụlọ nkwari akụ ha. Chebe onwe gị site na ịchọpụta otu esi achọpụta igwefoto zoro ezo gburugburu gị. Maka ịchọpụta ngwaahịa dị elu anyị maka ikpuchi pịa ebe a.
Ofzọ nke ịlele igwefoto zoro ezo:
N'ajụjụ ọnụ, otu onye na-ahụ maka nyocha ụzụ na ọgụgụ isi jụrụ ịkọwapụta aha ya n'ihi ịdị nkọ nke ọrụ ya wee gwa onye pseudonym Monk ahụ. Ọ chọgharịrị maka ngwa zoro ezo na mpaghara esemokwu maka ọkwa kachasị elu nke mpaghara ndị agha United States Pụrụ Iche Ọrụ. O nyere anyị otu ndụmọdụ ka anyị chọọ igwefoto zoro ezo.
E nwere ụzọ atọ kachasị mkpa maka ịlele maka igwefoto zoro ezo:
Nnyocha nke Mkpesa Redio (RF)
Ọchọ anụ ahụ
Gịnị bụ RF?
Ọ bụ nyocha ikuku redio na-enyere aka ịchọpụta ngwaọrụ na-ebugharị. N'ụbọchị ndị a, ọtụtụ mmadụ chọrọ ịnwe nzuzo ha mana ọtụtụ mmadụ na-eji ọtụtụ ngwaọrụ emeghe nzuzo nke ndị ọzọ. Ọtụtụ mmadụ nọ na ndozi maka ngwaọrụ dị otú ahụ na-emebi nzuzo nke ndị ọzọ mana site na iji mepụta nyocha redio ugboro ugboro, edozila nsogbu ahụ. Iji maa atụ, Spy Ihe nrịba ama nke igwefoto Bug / Ihe Mbepụta / Igwe Igwe Ọdụdọ (SPY 995), Ejiri Igwe Ngwá Ọrụ Ngwá Ọrụ Ngwá Ọrụ (SPY999), Ihe Nchọpụta Ihe Mgbaàmà nke GPS / SPY Camera RF, Range 1-8000MHz, GPS / 1.2G / 2G / 3G / 4G, Distance 5-8 (SPY993). Ngwaọrụ ndị a nwere ọrụ dị elu iji nyochaa igwefoto zoro ezo.
Etu esi achọta kamera zoro ezo:
Ichegbu onwe gị banyere ma à na-akpachara anya gị n'ụlọ, ụgbọ ala, n'ụlọ nkwari akụ, ma ọ bụ n'ọfịs nwere ike imebi izu ike na nkasi obi gị. Ebe nyocha adịghị nke zuru oke, ịnwere ike ime ihe ụfọdụ iji nwalee ịchọpụta igwefoto ndị zoro ezo na akụrụngwa ndekọ. Ikpebi ihe ị ga - eme n'ọrụ ga-esiri ike njide ejidere gị, yana ókè ị dị njikere ịmebi ọnụnọ gị iji mee nyocha.
Mee ịchụ nta anụ ahụ nke mpaghara ahụ, na-achọ ihe ọ bụla edobere anya dị ka anụmanụ karịrị akarị, ndị na-achọpụta anwụrụ ọkụ, okpokolo agba eserese, ma ọ bụ akwụkwọ. Nwere ike ịchọpụta igwefoto site na ịchọ ihe ndị yiri ka atọrọ n'akụkụ mpaghara nke ụlọ ahụ n'ụzọ adịghị njọ. Can nwere ike ịchọpụta igwefoto zoro ezo n’okpuru oche, tebụl ma ọ bụ sofas, ma ọ bụ n’ime ite ọ andụ andụ na ite ma ọ bụ n’azụ ákwà mgbochi.
Ebe ozo zoro ezo bu ichoputa ngwa ihe eji egwu egwu. Mkpuchi Nchedo niile, nke na-emepụta akụrụngwa CCTV, na-atụ aro ka ịgbanyụ ọkụ niile ma chọọ obere akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ ma ọ bụ ọkụ uhie; ihe ndị a bụ ihe ngosi nke “ike n’elu” ọkụ LED maka akụrụngwa ndekọ. Aro ọzọ bụ ịchọ ntụpọ na-adịghị mma ma ọ bụ oghere n'olulu ụlọ na mgbidi nke nwere ike igosi igwefoto zoro ezo n'azụ ya. Should kwesịrị ịgbanyụ akụrụngwa eletriki niile, tinyere friji na ikuku, ma gee ntị maka mkpọtụ ma ọ bụ ịpị nwere ike igosi ngwaọrụ ndekọ. Agbanyekwala ihe nchekwa elektrọnik, n'ihi na nke a nwere ike ibute mmejọ ma ọ bụ kpatara ebubo a na-atụghị anya ya.
Chọọ maka ọkụ na-enwu enwu ma ọ bụ nke na-enye ìhè. Imirikiti igwefoto na ngwaọrụ ndị na-ege ntị gụnyere ihe dị njikere ma ọ bụ na ọkụ, mgbanye ya ga-enyere gị aka ịchọta ya. Ọ bụ ezie na ọkụ ndị a nwere ike nwee nkwarụ oge ọzọ, onye mbido nwere ike chefuo ma ọ bụ nwee ike ịkọsara gị na ịchọghị ngwaọrụ ahụ kụrụ. Turngbanyụ ọkụ nwere ike inyere gị aka ịchọ ya.
Gbalịa ige ntị n'olu na-ada ụda elektrọnik, ma ọ bụ na-agba izu mgbe ị na-achọ ụlọ ahụ. Ọ bụ ezie na ọtụtụ ngwaọrụ e ji edekọ ihe nwere ike ịrụ ọrụ na nzuzo, a gaghị enwe ike ịpị clic na ngwaọrụ eletrik. Enwere ike ịnwe ọtụtụ ụda elektrọnik ị na-egegharị, ya mere gee ntị nke ọma na ihe ọ bụla na-ada dị iche. Ngwaọrụ ịnyere aka, dị ka igwe na-anụ ihe, nwere ike ọ gaghị akwado belụsọ ma ị na-eyikarị otu, ebe ọ bụ na ọ siri ike ịmata ọdịiche nke ụda ihe si mba ọzọ na mkpọtụ ihe na-anụ ihe n'onwe ya. Onye na - ahụkarị ihe redio bara uru na nke a. Maka ịgagharị ngwaahịa spy dị otú ahụ gaa na webụsaịtị anyị.
Nwuo ọkụ ọkụ n'akụkụ dị iche iche nke ime ụlọ ahụ, ọkachasị na mbara igwe. Mgbe ụfọdụ, ndị mmadụ na-ezochi ihe ndị e ji enyo enyo na-enyo enyo ma ọ bụ ụdị iko ndị ọzọ nke na-ekpuchi ihe ọ bụla dị n'azụ ya n'okpuru ọnọdụ ọkụ nkịtị, mana gosipụta ihe ọ bụla ma ọ bụrụ na ọkụ ahụ enwupụtara na ya. I nwekwara ike ijide ihe ngosi site na oghere igwefoto zoro ezo. Igwe ọkụ ga-enyere aka nyocha nke anụ ahụ gị site na ịbelata ohere nke anya gị na-achọ ma ga-enye gị ohere ilekwasị anya n'ihe ọ bụla na-abụghị ebe.
Jiri mkpịsị ugodi Redio (RF) mee ihe iji nye aka na nyocha gị. Unitslọ ndị a na-ejide aka nwere ike ịmata ụda redio nke ihe ndekọ ndekọ na-arụ ọrụ, ma nyere aka ịchọta ha. N’ebe onye na-achọpụta ihe mgbaàmà agaghị agwa gị kpọmkwem ebe igwefoto zoro ezo dị, ọ ga-adọ gị aka na ntị ka ị na-abịaru nso na isi mmalite ya, na-enyere gị aka ịchọta ya ngwa ngwa. N'akụkụ a, ngwaahịa anyị dị elu bara uru, maka nkọwa ndị ọzọ pịa ebe a.
Ọ bụrụ n’ịchọrọ iwepụtakwu oge na ịchọ igwefoto zoro ezo, inwere ike iru ebe ndị ọzọ ebe zoro ezo igwefoto nledo ma ọ bụ igwe okwu. Onye na-ahụ maka njem na njem Andrew Capelle na-ede na igwe anaghị ezo mgbe niile zoro ezo na nnukwu ihe, dịka ọmụmaatụ, nnukwu onyo TV. Ọ na-atụ aro ilebanye anya na mpaghara abụọ dị mkpa nke ọnọdụ zoro ezo dịka ndị ọkpọkọ, ikpe oriọna na oghere ikuku; na obere ihe na-agbanwe agbanwe dị ka elekere mkpu, oriọna, ma ọ bụ ekwentị.
N'uzo, uzo nke ekwuputara n’elu nke ichoputa ihe nzuzo zoro ezo n’ime ulo, n’ọfịs, ma ọ bụ n’ụgbọ, anyị ga-ewepụta ụfọdụ usoro na ụzọ nke ịchọpụta zoro ezo igwefoto.
Etu esi abanye ime ụlọ / ụgbọ ala / ọfịs maka Ngwaọrụ elektrọnik enyemaka site na enyemaka nke redio Frequency Detector:
Ọ bụghị naanị ndị gọọmentị na-eji igwe anaghị ege ntị ma ọ bụ nchinchi kamakwa ọ bụ azụmahịa na ndị chọrọ ịpu ma ọ bụ ledoo ndị ọzọ. Ọ bụ ezie na ụfọdụ n'ime ngwaọrụ ndị a tozuru oke na nkà na ụzụ nke na ọ fọrọ nke nta ka ha ghara ịchọpụta, enwere ike ịchọpụta ọtụtụ nchinchi na ịdị mfe site na ntanetị n'ihi ndabere ha na isi mmalite na akara redio. Iji kpebie ma ọ bụrụ etinyere ngwaọrụ ndị na-ege ntị n'ụlọ gị, n'ọfịs gị, ma ọ bụ n'ụgbọ gị, ị ga-enyocha isi mmalite niile wee nyocha maka redio na mpaghara.
Oche Isi mmalite:
Wepu efere ndị mepere emepe ma gbanye efere n'ime ụlọ ị na-achọ. Ozugbo i wepụrụ efere, ị kwesịrị ileba oghere nwere akụkụ anọ nwere mkpokọta wires na mgbidi n’azụ ya. Oghere ndị a bụ nnukwu ebe maka ngwaọrụ zoro ezo n'ihi na ha na-enye ohere dị mfe na isi iyi: wires. Ugbu a, nwuo ọkụ gị n'ime oghere nke dị na mgbidi. Will ga-ele anya naanị n'ime eriri ọkụ. Ọ bụrụ na ị ga-amata banyere ihe ọ bụla nke na-enyo enyo ma ọ bụ na-apụ apụ, emetụla ya aka. Kpọtụrụ ndị ọrụ mmanye iwu ma gwa ha ihe ị chọtala.
Nyochaa isi mmalite ọ bụla enwere ike ịbanye n'ime ụlọ ahụ, dịka, igbe fuuz na nrụnye ọkụ n'otu ụzọ ahụ. Ọzọ, ọ bụrụ n’ịchọpụta ihe ọ bụla, kpọọ ndị uwe ojii.
Lelee ebe ndị dịpụrụ adịpụ na oghere dikwa. N'ebe ndị a, a na-enwekarị nnukwu mkpirikpi, ebe a na-enweta ike dị mfe.
Calichekwa ugboro ole Redio:
Tụgharịa na redio Frequency (ahụhụ) ịchọpụta redio gị, na-atụgharị ọkpụkpọ ya ma tọọ ya n’elu ebe dị larịị. O kwesịrị ịmalite ihi ura ngwa ngwa.
Pịagharịa na ihe nchọpụta redio Redide na-ehi ụra ruo mgbe ụra na-akwụsị kpamkpam.
Kpọọ ekwentị site na ekwentị gị gaa na nke ọzọ ebe ị kwụ n'akụkụ nri redio Frequency. Ọ kwesịrị ịmalite beeping ngwa ngwa ọzọ.
Bugharịa ihe dị ka 10 gaa na 12 site na ihe nchọpụta redio maka ị na-eme ka njikọ ekwentị mepere emepe. Onye nchọpụta ahụ kwesịrị ịdị na -ekwu mkpọtụ, ma jiri nwayọ nwayọ, na ogo nke 160 gbagwojuru kwa nkeji. Ọ bụrụ na ọ na-agbada nwayọ nwayọ karịa 120 kụrụ kwa nkeji banyere ihe abụọ kwa sekọnd, gbanye akụrụngwa iji nwetakwuo nghọta. Ọ bụrụ na ọ na-eti ọsọ ọsọ karịa ihe 160 kụrụ kwa nkeji, gbanye ọsịsọ obere.
Bugharịa onye na-ahụ maka redio ugboro ugboro na mpụga nke ngwaọrụ elektrik niile dị n'ime ụlọ ahụ, na-edebe redio Frequency Detector ihe dịka ụkwụ abụọ site na ngwaọrụ ọ bụla. Ọ bụrụ na ọ malite ihi ụra, gbaa mbọ hụ na agbanyụla ngwaọrụ gị na - enyocha gị, gbanyụọ ma nyocha ya ọzọ. Ọ bụrụ na onye na-achọpụta redio ugboro na-ehi ụra ngwa ngwa, ịnwere ike ịchọta ahụhụ.
Nọgidenụ na usoro a na ihe niile na-enweghị ihe ọ bụla n'ime ụlọ-faịlụ kabinet, tebụl, oche, wdg-na akpatre na mgbidi. Otu mkpọtụ sitere na ihe nchọpụta Radio Frequency ikekwe adighi egosi na ị hụla ahụhụ; Gee ntị dị ka ihe ọzọ maka ịda ụra ngwa ngwa, na-ehi ụra oge niile, nke ga-egosi nrụnye mgbaama redio.
Kpọọ ụlọ ọrụ ndị uwe ojii dị nso ma ọ bụrụ na ikwere na ịchọtala ihe ọ bụla.
Ihe ị ga - eme ma ọ bụrụ na ị nwetaghachi igwefoto zoro ezo:
Ọ bụrụ na mmadụ zochie igwefoto n'ụlọ, ime ụlọ nkwari akụ, mgbazinye, na ụgbọ ala, ọ megidere iwu ma naanị site na ikike nke iwu ị nwere ike ime ya. Iji maa atụ, n’ime iwu ụlọ ọrụ nke mgbazinye gbasara ngwaọrụ elektrọnik ekwupụta na ha choro ndị ọbịa ka ekpughee ngwa onyunyo dị na listi ha, ha na-amachibido ngwa ọ bụla nke na-enyocha ma ọ bụ na-enyocha anya nke ụfọdụ ebe nzuzo dị ka ime ụlọ na ime ụlọ ịsa ahụ agbanyeghị. banyere ma ekpughere ha. Gbaa mbọ hụ na inyochala oge ezumike n’ụlọ ezumike maka ịkpọtụrụ igwefoto ọ bụla ebe a tupu ị deba ya. Ọ bụrụ n’ịchọpụta otu n’ime mgbazinye ezumike gị, pụọ ozugbo ma gwa ụlọ ọrụ ahụ. Ọ bụrụ n ’ị ga-ahụ igwefoto zoro ezo n’ime ụlọ nkwari akụ, rịọ ozugbo maka mgbanwe ụlọ. Maka ngwaahịa onyunyo dị elu pịa ebe a.
Igwefoto Lawson zoro ezo dị iche n'etiti ikike ndị uwe ojii. N'ọtụtụ ọnọdụ, ọ nwere ike bụrụ mmebi iwu maka mmadụ idetu gị na-amaghị. Dị ka teknụzụ na-aghọ, igwefoto na ngwaọrụ ige ntị adịla jụụ, pere mpe ma dịkwa mfe nghọta. Ọ bụ ezie na nke a buru ibu nye onye ọ bụla chọrọ ịme nyocha, ọ na-ebelata ikike gị iji nwee obi iru ala n'anya anya, ọbụlagodi mgbe ị nọ naanị ya. Mgbe ụfọdụ, enwere ike ichebe gị na igwefoto zoro ezo site na iwu ikike gị-dịka ndị uweojii, dịka ọmụmaatụ, enweghị ike ịgha ngwaọrụ ndị a na-enweghị akwụkwọ ikike, na ụmụ amaala nkeonwe enweghị ike idekọ ụda ma ọ bụ vidiyo na ebe nzuzo na-enweghị ihe ọmụma na ikike nke onye a na-edekọ ede — ịmara otu esi achọpụta ihe ezoro ezo ga-aba uru karịa iwu echebere iji chebe gị ka ị ghara ime ha.
Ọ bụrụ n’ịhụ na mmadụ na-emebi iwu gị site na imebi ihe nzuzo gị, gwa ndị uwe ojii otu oge, njikwa ụlọ nkwari akụ ma ọ bụrụ na ị nọ na họtel maka ezumike ma ọ bụ mgbasa ozi. Kwesịrị ịchọ ụlọ nwere nnukwu nlezianya iji jide n'aka na ị ghasasịa akụrụngwa ma ọ bụ arịa ọ bụla, n'ihi na nke a nwere ike ibute nsogbu obodo na nke ndị omekome (ọ bụrụ na ịnọ n'ụlọ nkwari akụ). Zere arụmụka nke okwu na-ekpo ọkụ na ndị ọrụ na họtel nwere ike ịdaba na nsonaazụ anụ ahụ.
Mgbe ị na-ekwesịghị ịchọ maka igwefoto zoro ezo:
Ckinglele maka igwefoto zoro ezo oge niile abụghị ezigbo echiche. Onye isi oche nke arụmọrụ dị elu nke arụ ọrụ na onye bụbu onye agha nke Special Forces na Green Beret bụ nke a na-eche na n'ọtụtụ mba dịka Russia na China ọ ga-ekwe omume gọọmentị ọgụgụ isi na-arụsi ọrụ ike na-elele ụlọ oriri na ọ frequụ frequụ ndị njem na-agakarị. Onye ọ bụla ha lere anya site na iji usoro nchọta iji chọpụta ngwaọrụ zoro ezo na ebe obibi ha nwere ike kpọọ ya dị ka ọrụ ọgụgụ isi na-emenye ụjọ ma mesoo ya. Bringwebata ọbụna ntakịrị ngwaọrụ ọchụchọ dị ọnụ ala n'ime mba ndị a nwere ike ịdọnye onye njem na mmiri ọkụ, mgbe ụfọdụ tupu ịbanye n'ọdụ ụgbọ elu.
Nzuzo 10168 1 Echiche Taa